Dhex-dhexaadinta Axmad Karaash iyo MW Deni oo rajo ka soo muuqato - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dhex-dhexaadinta Axmad Karaash iyo MW Deni oo rajo ka soo muuqato
Dhex-dhexaadinta Axmad Karaash iyo MW Deni oo rajo ka soo muuqato
Iyada oo qilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Deni yo Karaash uu meel xun gaaray ayaa waxaa ku baxay isimada Puntland si loo dajiyo. Qayb kamida dhex-dhexaadintaas ayaa saakay loo faarisan doonaa. Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sida qorshaysan saaka oo Axad ah la kulmaya qaar kamid ah Isimada Dhaqanka Puntland oo ku hawllan dhex-dhexaadinta khilaafka isaga iyo Madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan.
Waxaa ka filayaa Isimada oo ay weheliyaan Guddoonka Baarlamanka in ay saaka madaxweynaha kula kulmaaan xarunta Golaha Wakiilada Puntland ee Caasimadda Garoowe si looga dhegaysto qaladaadka uu ka tirsanayo Madaxweyne ku xigeenkiisa. Isimada dhex-dhexaadinta wada iyo Guddoonka Baarlamanka ayaa sidoo kale shalay la kulmay Madaxweyne ku xigeenka oo ay ka dhegaysteen qaladaadka uu tabanayo ee dhaliyay Muranka isaga iyo Madaxweyne Deni.
Waxaa horay u jiray dadaallo lagu doonayay xallinta Khilaafka labada Hoggaamiye ayaa fashil ku dhammaaday waxaana haatan Isimadu wadaan dadaalkii u dambeeyay si loo dhammeeyo isfaham-waaga Deni iyo Karaash oo gaarsiisan heer aysan salaanta iska qaadin.
Previous articleHal gabar oo ka bad-baaday gaarigii qaraxa lagula eegtay duleedka Muqdisho
Next articleSomalia Says Elections Set for Early 2021 Despite Virus Risk
(XOG) RW Khayre & MW Farmaajo oo kadhaxeeyo khilaaf aad u adag
Waxaa maalmihii u danbeeyay Kooxda ololaha Madaxweyne Farmaajo usheegayeen siyaasiinta mucaaradka & Xildhibaanada JFS in ay ceeri doonan RW Hassan Ali Kaire maadama Madaxweyne...
(XOG) RW Khayre & MW Farmaajo oo kadhaxeeyo khilaaf aad u...